မယ်လွန်း - မိုင်းတွေ မထောင်နဲ့တော့ ၊ စစ်တွေ ငြိမ်းချမ်းတော့၊ ဒါပဲ…. - MoeMaKa Media
Home / Currents / HI Burma / Myanmar NOW / မယ်လွန်း - မိုင်းတွေ မထောင်နဲ့တော့ ၊ စစ်တွေ ငြိမ်းချမ်းတော့၊ ဒါပဲ….
မယ်လွန်း - မိုင်းတွေ မထောင်နဲ့တော့ ၊ စစ်တွေ ငြိမ်းချမ်းတော့၊ ဒါပဲ….
Currents, HI Burma, Myanmar NOW
(Myanmar NOW) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၉
ခြေတု၊ ချိုင်းထောက်တို့သည် ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မုန်းဒေသ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်လာသည် (ဓာတ်ပုံ - မယ်လွန်း/HI)
မယ်လွန်း - မိုင်းတွေ မထောင်နဲ့တော့ ၊ စစ်တွေ ငြိမ်းချမ်းတော့၊ ဒါပဲ…. Reviewed by MoeMaKa on 4:45 AM Rating: 5